के तपाई भोकै पर्नु भएको छ ? सीतापाइलामा पाइन्छ निशुल्क खाना : नेपालमाला
के तपाई भोकै पर्नु भएको छ ? सीतापाइलामा पाइन्छ निशुल्क खाना
May 10, 2020 --
काठमाडौं : नेपाल लकडाउन भएको डेढ महिना नाघिसकेको छ । गत चैत ११ गतेबाट सुरु भएको लकडाउन सरकारले जेठ ५ गतेसम्म लम्ब्याएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्नका लागि सुरु गरिएको लकडाउनमा दैनिक श्रम बेचेर गुजारा चलाउँदै आएका मजदूर, गरिव र असहाय मर्कामा परेका छन् ।
लगातारको लकडाउनले उनीहरुको दैनिकी नै चौपट बनेको छ । काम गर्न नपाउँदा मजदूरहरु भोकभोकै परेका छन् । लकडाउनका कारण समस्यामा परेकाहरुलाई अहिले विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिहरुले निरन्तर सहयोग गर्दै आएका छन् । गरिव र निमुखाको भोको पेट भर्ने अभियानमा सीतापाइलाको खोपा टोल विकास समाज पनि लागेको छ ।
नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर ४ को खोपा टोल विकास समाजले हरेक बेलुका दैनिक चार सय जनालाई खाना खुवाइरहेको छ । गरिव तथा विपन्नलाई खाना खुवाउने अभियानमा समाजलाई सिद्धार्थ कलेज, सीतापाइला तेक्वान्दो डोजाङ र जलविनायक महिला समूहले पनि सहयोग गर्दै आएका छन् । गत बैशाख १७ गतेबाट सुरु गरिएको निशुल्क खाना खुवाउने अभियान हालका लागि बैशाख ३१ गतेसम्म सञ्चालन गरिने र त्यसपछिको अवस्था हेरेर निर्णय गरिने संयोजक शिव महर्जनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सुरुमा केही साथीभाइको सहयोगबाट सुरु भएको अभियानमा पछिल्लो समय सहयोगी हातहरुको सहयोगबाट नै अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
कलंकी र सीतापाइला क्षेत्र काठमाडौं भित्रिने र बाहिरिने ट्रान्जिट प्वाइट पनि हो । लकडाउनका कारण आ–आफ्नो घर जान नपाएका र सडकमा आश्रितहरु खाना खान आइरहेको संयोजक महर्जनले जानकारी दिए ।
गरिव तथा विपन्नहरुलाई खाना वितरण गर्दा स्वास्थ्य सचेतनालाई पनि उक्तिकै ध्यान दिइएको छ । सामाजिक दूरी कायम गर्न गोलो घेरा लगाएर लाइन बस्न लगाइएको छ भने स्यानिटाइजरले हात सफा गरेपछि मात्र खान दिने गरिएको छ । खाना वितरण गर्ने स्वयंमसेवकले पनि पीपीई, माक्स र पञ्जा लगाएर मात्रै खाना वितरण गर्दै आइरहेका छन् ।